पानी यातना - एक एनालिटिक्स सादृश्य एक ब्रिज एकदम टाढा जान्छ | Martech Zone
पानी यातना - एक एनालिटिक्स सादृश्य एक पुल एकदम टाढा जान्छ
बुधवार, अगस्त 12, 2015 जिम स्टर्ने
पानी, जस्तै पानी, धेरै रूपहरूमा आउँदछ। हाम्रो दिमाग आउने अधिकांश डेटा फिल्टर आउट गर्न मानवीय विकास भएको छ किनकि त्यहाँ यति धेरै मात्र छ।
जब तपाईं आफ्नो आँखा र कान खोल्नुहुन्छ, डाटा जताततै हुन्छ। भित्ताको रंग, वातानुकूलनको आवाज र तपाईंको छिमेकीको कफीको गन्ध आर्द्रता जस्तो व्यवहार गरिन्छ। पानी हर समय हावामा रहन्छ तर यसमा धेरै ध्यान दिन यो उपयोगी छैन।
जब पानी कुहिरोमा परिणत हुन्छ, यसले तपाईंलाई यसलाई हेर्न बाध्य पार्छ र तपाईंको वरिपरिको संसारलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ। अपूर्ण डाटासेट, भ्रष्ट डाटा, खराब विज्ञान, गलत निष्कर्ष र संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह सबै तपाईं लाई धुंध मा आफ्नो बाटो गुमाउन बनाउन।
डाटा वर्षा जस्तो झर्छ। जब त्यहाँ केहि थोरै हुन्छ, यो हिंस्रक रूपमा असन्तुष्ट हुन्छ - केवल तपाईंको कारलाई फोहर बनाउने र कुराकानीलाई भ्रमित तुल्याउने पर्याप्त। तपाईले आफैंको चश्मामा ठाउँ सफा गरिरहनु भएको छ कसै कसैले केही अनियमित डाटा पोइन्टको स्पॉट गरेको खण्डमा केही अस्पष्ट स्रोतबाट निकालेको हुन्छ।
बासी पानी उथल पोखरीमा खतरनाक हुन्छ। डाटा, अविश्वसनीय आपूर्तिबाट स collected्कलन गरिएको, न त सफा गरिएको वा सामान्यीकृत गरिएको छ र स्थिर बढ्नको लागि बायाँ, सजिलै गल्तीपूर्ण निष्कर्ष निम्त्याउन सक्छ।
A स्थिर ट्रिकल पानीको एक क्यान्टिन भर्न वा वुडल्यान्ड इकोसिस्टमलाई धान्न पर्याप्त छ। केवल तीन डाटा पोइन्टहरू (पठाईएको ईमेलहरूको संख्या, बनाम खोलिएको, बनाम क्लिक) मार्केटिंग कार्यक्रम कायम गर्न सक्दछ।
A स्वस्थ प्रवाह सानो क्रिकको रूपमा डाटाको स्नानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक सतत डेटा प्रवाह बेंचमार्किंग र ऐतिहासिक तुलना अनुमति दिन्छ। ल्यान्डिंग पृष्ठ अप्टिमाइजेसन स्थिर रूपान्तरण डेटाको साथ पूरा गर्न सकिन्छ।
A सामान्य नदी मिललाई आरा काठ वा ग्राउन्ड पीस गर्न उर्जा दिन सकिन्छ। एक सिफारिस इञ्जिनलाई मात्र शपिंग कार्टको मूल्य वृद्धि गर्न मुठ्ठी सहायक सहायकहरूको भरपर्दो योगदानको आवश्यक छ।
A झण्डा को एक विशाल वाटरव्हील चलाउन सक्छ र जानकारी को एक पर्याप्त आगमन एक वास्तविक समय, गतिशील सामग्री प्रणाली ड्राइव गर्न सक्छन्।
A नदी त्यो फराकिलो र गहिरो छ यसले सम्पूर्ण यातायात उद्योगलाई समर्थन गर्न सक्छ। पर्याप्त डाटा विज्ञापनहरू, लोयल्टी कार्ड प्रोग्राम डाटा एग्रीगेटरहरू, र डाटा दलालबाट कुकीहरूको स of्ग्रहको आकारमा बार्गेज र कार्गो जहाजहरू फ्लोट गर्न सक्दछ।
जब डाटा अपेक्षित रकम अपेक्षित समयमा आइपुग्छ, यो क्याप्चर, च्यानल र प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिँचाइ प्रणाली, बाँध र जलाशयहरूले नियन्त्रणको भावना प्रदान गर्दछ र नहरहरू, तालाहरू र बाँधहरूमार्फत कहिल्यै विस्तार हुने पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुमति दिन्छ। डाटा गोदामहरू कम भरोसायोग्य प्रवाहहरूमा निर्माण गरिएको छ।
सफाइ ईश्वरताको पछि हुन्छ
स्वच्छ पानी जीवन, सिँचाइ, चालू बिजुली संयंत्र, आदि को सफलता को लागी महत्वपूर्ण छ "सफा" को परिभाषा उद्देश्य को लागी परिवर्तन हुन सक्छ; यो ठीक छ यदि पानीमा शैवाल छ जसले बिजुली प्लान्टलाई चिस्याउँछ र यदि यो पिउने पानीमा आर्सेनिकको १० अर्ब भन्दा बढी अंशहरू छन् भने यो स्वीकार्य छैन।
डाटा उस्तै छ। एक सीधा मेल अनुप्रयोगमा, तपाईंसँग एक व्यक्तिको शीर्षक छ कि छैन (श्री, श्रीमती, सुश्री) अपरिवर्तनीय छ ... जब सम्म तपाईं डाक्टरहरूलाई पत्र पठाउँदै हुनुहुन्न। तर फोहर डाटा तपाईलाई हरेक चोटि ट्रिप गर्नेछ।
अमेरिकी प्रमुख डाटा वैज्ञानिकको रूपमा, डीजे पाटिल, यसलाई पहिलो राउन्ड CTO शिखर सम्मेलनमा राख्नुहोस्, "यदि तपाइँ शुरूबाटै तपाइँको डेटा कसरी सफा राख्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्न भने, तपाइँ एफ ¢ ¢ र एड हुनुहुन्छ। म यसको ग्यारेन्टी गर्छु। यो तथ्यलाई सफा गर्ने कोसिस गर्दा कम्तिमा महिनौं लाग्नेछ। "
यदि तपाईंले उमाल्ने बिन्दुमा पानी तातो गर्नुभयो भने, यसले सम्पूर्ण औद्योगिक क्रान्तिलाई शक्ति दिन सक्छ। डाटाले उही चीज गरिरहेको छ। त्यस क्षणबाट कम्प्युटरहरूले भण्डारण गर्न सक्दछन र डाटा पनि स collected्कलन गरिएको छ, डाटा छिटो स collected्कलन गरिएको छ भण्डारण उपकरणहरू त्यसो गर्न सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यी सहायक नदीहरूबाट डाटा मिलहरू इञ्जिनहरू मार्फत ट्रिकल भएपछि, यो सबै बाँध पछाडि तालमा समाप्त हुन्छ। डेटा नियन्त्रण गरिएको फेसनमा छोडियो, यसले डाटा उद्योगको टर्बाइनहरूलाई शक्ति दिन्छ; गुगल र फेसबुक जस्ता नामहरूको साथ डाटा प्रोसेसिंगको ती विशाल इञ्जिनहरू। यहाँ सुख्खा हुने छैन।
र अन्तमा, त्यहाँ पानीको गहिरो पोखरी छ, विश्लेषकले डुब्नको लागि कुर्दै। स्कुबा गियर र भाला बन्दूक हातमा छ, विश्लेषकले गहिरो अनुसन्धान गर्छन्, नयाँ जग्गाको नक्शा दिन्छन् र नयाँ प्रजातिहरू पत्ता लगाउँदछन्। डाटा एक्सप्लोरर बन्नको लागि यो धेरै रोमाञ्चक समय हो।
यसैले ती मध्ये धेरैलाई देखाईएको छ ई मेट्रिक्स शिखर सम्मेलन २००२ देखि। अर्को अवसर बोस्टनमा छ, सेप्टेम्बर २ to देखि अक्टुबर १, २०१।।
eMetrics समिट रेजिष्ट्रेसन
धेरै टाढा पुल
र अर्को ग्रान्ड क्यान्यन कोर्नु डाटा को शक्ति को के? संरचित डाटाको हिमन पग्लने बारे के हुन्छ? हामी कसरी संसारको फोहोर पानीलाई बढी र अधिक गोपनीयता सचेत हुनका लागि व्यवहार गर्ने छौं?
ती प्रश्नहरू अर्को समय र पूल मुनिको पानीका लागि हुन्।
टैग: विश्लेषणतथ्याङ्कडाटा सफाईडेटा विज्ञानइमेट्रिक्सइमेट्रिक्स समिट
जिम स्टर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता हो जसले मूल्य निर्धारण र ग्राहक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्न मापन गर्दछ। स्टर्न्नेले अन्तर्क्रियात्मक मार्केटिंगमा आठवटा पुस्तकहरू लेखेका छन्, उनीका संस्थापक राष्ट्रपति र वर्तमान अध्यक्ष हुन् डिजिटल एनालिटिक्स संघ र उत्पादन गर्दछ ई मेट्रिक्स शिखर सम्मेलन र मिडिया एनालिटिक्स समिट.
के खरीद बटनले सामाजिक मिडिया एट्रिब्युसन र आरओआईलाई मद्दत गर्दछ?
गुणवत्ता बनाम मात्रा सामग्री: कम लेख्दा ROI